Thursday October 04, 2018 - 11:40:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Duqeyntan wuxuushnimo oo ay geysteen diyaaradaha dagaal ee cadowga ayaa xalay fiidkii lagu beegsaday xaafado ay ku noolyihiin dad rayid ah oo ku yaalla degmada Ceel-cadde, Iyadoona duqeyntu ay geysatay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka
Duqeyntan wuxuushnimo oo ay geysteen diyaaradaha dagaal ee cadowga ayaa xalay fiidkii lagu beegsaday xaafado ay ku noolyihiin dad rayid ah oo ku yaalla degmada Ceel-cadde, Iyadoona duqeyntu ay geysatay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ah iyo guryahooda.
diyaaradahan oo ahaa kuwo dhowr ah ayaa duqeynta bilaabay xilli fiid ah waxayna beegsadeen xaafado kala duwan oo dhammaantood katirsan magaalada Ceel Cadde.
Duqeynta ugu xooggan ayaa ka dhacday xaafadda Makka ee loo yaqaano Qansax Oomane oo ka mid ah xaafadaha degmada Ceel-Cadde halkaas oo ay guryo dad shacab ah leeyihiin ku burbureen.
Inkastoo duqeyntu ay ahayd mid xooggan oo socotay muddo saacado ah hadana Allaah fadligiis khasaaruhu wuu ka yaryahay sida uu cadowgu damacsanaa.
Ma jiro khasaare dhimasho oo soo gaaray dadka deegaanka waxaana dhibaatada ay geysatay duqeyntu isugu jirtaa dhaawac iyo burbur soo gaaray guryaha dadka rayidka ah ee la beegsaday.
Dadka ugu badan ee ku dhaawacmay duqeynta waa dumar iyo carruur kuwaas oo hadda xaaladooda lagula tacaalayo goobo caafimaad oo ku yaalla magaalada Ceel-Cadde.
Dadka Muslimiinta ayaa isla xalayba isaga soo gurmaday xaafadaha kala duwan ee magaalada kuwaas oo caawiyay dadka dhibanayaasha ah ee ay duqeyntu saameysay.
Duqeyntan habeenkii xalay ahaa diyaaradaha shisheeye ku qaadeen degmada Ceel-Cadde ayaa kusoo aadaysaa iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay uu cadowgu kordhiyey duqeymaha wuxuushnimo ee sida indha la'aanta ah u beegsanaya dadka rayidka ah ee ku nool wilaayaatka dalka, waxaana xusid mudan in sidan oo kale ay dhawaan diyaaradaha dowladaha shisheeye u duqeeyeen degmada Saakoow waana tallaabo gurracan oo tilmaan u ah cadaawadda gaamurtay ee shisheeyuhu u hayaan shacabka Soomaaliyeed.
inta badan duqeymaha laayaanka ah waxaa gobolka Gedo ka geysta diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya oo caan ku ah iyo dadka xoola dhaqatada ah ku duqeyso Wara biyoodyada sidoo kale waxay diyaaradaha Kenya beegsadaan isku imaatinnada shacabka ee tuulooyinka gobolka Gedo.
Duqeyn bishii lasoo dhaafay lagu burburiyay isbitaalka guud ee degmada Saakoow iyo Kuleej Carruurta wax lagu baro ayaa loo malaynayaa in ay mas'uul ka aheyd dowladda Kenya oo ciidamadeedu duulaan Gardarra ah ku joogaan Gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose, madaxda dowladda Federaalka kama hadlaan gummaadka Kenya ay ku heyso shacabka Soomaaliyeed balse marmarka qaar dowladda Farmaajo ayaaba ku faanta in ay wax ka ogeyd duqeymahaasi.